नेपालले पनि क्रिकेट खेल्यो। र जित्यो! - Blogs of Sagar Prasai
नेपालले पनि क्रिकेट खेल्यो। र जित्यो!
हामी सानो हुँदा, नेपालमा क्रिकेटको त्यति चर्चा थिएन। हाम्रो घर देखी पल्लो पटि मेरो ममिको ठुलोबुवाको घर थियो, अहिले पनि छ। ममिको ठुलो बुवालाई हामी सबै जना पल्ला घरे हजुरबुवा भन्थ्यौँ। वहाँले मात्रै हुनुहुन्थ्यो- त्यो बेला क्रिकेट बुझ्ने। हजुरवुवाको आफ्नो सानो रेडियो थियो, त्यसमा भारतको स्टेसन टिपाएर- हिन्दीमा क्रिकेट खेलको कमेन्टेरी सुनेर बस्नुहुन्थ्यो। तर हजुरवुवाको रेडियो धेरै जसो स्या, स्या गर्ने अनि सानो बज्थ्यो।
हाम्रो घरमा चाहि ममिको विवाहको बखतमा मामाघरबाट आएको प्यानासोनिकको दामी टेप रेकर्डर सहितको रेडियो थियो। त्यसकारण हजुरवुवा दिउँसो म्याच भएको बेला हाम्रो घरमा नै क्रिकेटको कमेन्टरी सुन्न आउनुहुन्थ्यो। रेडियो छेउमा मुडामा बसेर क्रिकेट खेल सुन्न थाले पछि, एकछिनमा ममिलाई भन्नहुन्यो- “ तेरो घरमा आज चिया पाक्दैन नि!”
अनि ममिले हजुरवुवालाई कडा रंग भएको तर चिनी बिनाको बाक्लो दुधको चिया बनाएर दिनुहुन्थ्यो। चिया हातमा लिएर, कागजमा सुर्ती बेरेर बनाएको चुर (चुरोट) काँदै हजुरवुवा रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो।“
म त्यो बेला त्यतै वरीपरी हुन्थे। हजुरवुवालई सोध्थे-“आज कसकसको खेल हो हजुरवुवा?”
वहाँले सुन्ने खेल प्राय भारत र अरू देशको बिच हुन्थ्यो।
अनि म सोध्थे- “नेपालले चाहि खेल्दैन क्रिकेट?”
वहाँ हास्दै भन्नुहुन्थ्यो-“जान्दैन, कान्छा तेरो नेपालले!” अनि हाँस्नुहुन्थ्यो।
धेरै वर्ष भारतमा नै बिभिन्न काम गरेर बस्नुभएका हजुरवुवा हामीलाई गिज्याउनु पर्यो भने- तेरो नेपाल भन्नुहुन्थ्यो।
पछि गाउँमा केबल टिभि आएपछि हजुरवुवालाई झन् सजिलो भयो। एउटै म्याच जति दोहोर्याए पनि वहाँ हेर्नुहुन्थ्यो। हामी सबै हजुरवुवा सँग बसेर क्रिकेट हेर्थ्यौँ- क्रिकेट मनपरेर हैन। वहाँले खेलाडीलाई बिभिन्न नाम राखेर गाली गरेको सुनेर मरी मरी हाँस्नलाई।
अलि पछि हजुरवुवा बित्नुभयो। कति दिन सम्म गाउँ नै सुन्य भयो।
आज हजुरवुवा हुनुभएको भए- नेपालले खेलेको र जितेको हेरेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो होला- “खेल्यो नि कान्छा तेरो नेपालले पनि।“
हामी हजुरवुवालाई उल्याउदै भन्थिम होला- “खेल्यो मात्रै त हजुरवुवा- जित्यो पनि नि!”
अनि हजुरवुवा हातमा दुधको चिया बोकेर, अर्को हातले कागजमा सुर्ती बेरेर बनाएको चुर खादै- हाँस्नुहुन्थ्यो होला।